Tun Tun's Photo Diary: Cameron Highland, Malaysia #1
Tun Tun's Photo Diary
Cameron Highland, Malaysia #1
2011-Oct-20 ၇က်နေ.ည ၁၀ နာ၇ီကားနဲ. စင်ကာပူကနေ မလေးရှား နိုင်ငံက လက်ဖက်စိုက်ခင်းတွေ နဲ. နာမည်ကြီးတဲ့ Cameron Highland ကို ခရီးစထွက်ခဲ့ပါတယ်။ Five Star Tour (အခုတော့မရှိတော့ဘူး) ကနေ2Days 1 Night Free & Easy tour package ၀ယ်ပြီးသွားတာပါ။ တယောက်ကို $185 လောက်ပေး၇တယ်။ Package ထဲမှာ ပါတာကတော့
- Singapore <-> Cameron Highland Bus tickets
- 1 Night stay in Hotel Equatorial (Including breakfast)
ည ၁၀နာ၇ီ တိတိမှာ VIP bus နဲ. စင်ကာပူ Golden Mile ကားဂိတ်ကနေ ကားစထွက်ပါတယ်။ ကားက အင်မတန်ကို ဇိမ်ကျပါတယ်။ အပေါ်ပုံ ကိုသာကြည့်လိုက်ပါ။ ခြေထောက်ဆန်.ပြီး ထိုင်လို.ရပါတယ်။
On 2011-Oct-20, I went to Cameron Highland, Malaysia from Singapore with Five stars Free * Easy Tour. The package costs about $185 per person. It includes two ways transportation with VIP bus from Singapore<->Cameron Highland and one night stay at Hotel Equatorial at Cameron High. I think it wasagreat deal. The bus departed from Singapore at 10pm and arrived Cameron Highland at 7am next day.
နောက်တနေ. မနက် အလင်းေ၇ာင်စထွက်တော့ တောင်တက်လမ်းပေါ်ေ၇ာက်နေပြီ ဆိုတာ သတိထားမိတယ်။ အကွေ.အကောက်တွေ များတာကိုး။ မနက် ၇နာ၇ီလောက်မှာတော့ Cameron Highland မြို.ကိုေ၇ာက်ပါတယ်။ Bus က ဟိုတယ်ကို တန်းမသွားပဲ Tour companyေ၇ှ.မှာ ခဏ၇ပ်ပါတယ်။ အဲဒီ Tour company က guide လို ပုံစံလူတစ်ယောက် ကားပေါ်တက်လာပြီး Cameron Highland မှာ ရှိတဲ့ လည်စ၇ာ နေ၇ာတွေ နဲ. သူ.ဆီ မှာ ရှိတဲ့ Full/Half day tour package တွေပါတဲ့ ကြော်ငြာစာ၇ွက်တွေဝေပါတယ်။ ကျွန်တော်အပါအ၀င် ကားပေါ်မှာပါတဲ့ လူတွေ တော်တော်များများက ဒီမှာ ၁၇က်ပဲ နေမှာ ဖြစ်လို. တခြား Tour package တွေ လိုက်ပြီး စုံစမ်း၇င် အချိန်ပုတ်မှာ ဆိုးတာနဲ. အဲဒီ Tour company ကပဲ ၀ယ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်က Half-day tour ၂ ခုဝယ်လိုက်ပါတယ်။ တခု ကို RM60 လောက်ပေးရပါတယ်။
မနက်ပိုင်း Tour က Tea plantation နဲ. Mossy forest ပါတဲ့ tour ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Tour မှာ light refreshment (ေ၇နဲ. မုန်.) ပါပါတယ်။ ညနေပိုင်း Tour ကတော့ Strawberry farm, lettuce farm နဲ. Cactus farm တွေ လိုက်ပို.တဲ့ Tour ပါ။ သူကတော့ Steamboat Dinner ပါပါတယ်။ စိတ်ဝင်စား၇င် နောက်နေ.မနက်အတွက် sunrise tour တွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက မနက် အစောကြီး ၄နာ၇ီလောက် သွား၇တဲ့ Tour မို.လို. ကိုယ်က ကနေ. တနေကုန်လည်မှာဆိုတော့ အ၇မ်းပင်ပန်းမှာ ဆိုးတာနဲ. Half-day tour ၂ခုနဲ.ပါ Cameron Highland ခရီးစဉ်ကို ကျေနပ်လိုက်တယ်။
ကားခဏ၇ပ်တဲ့နားမှာ Food court ရှိပါတယ်။ မနက်စောသေးတော့ ဆိုင်တွေ သိပ်အများကြီး မဖွင့်သေးပါဘူး။ ဖွင့်တဲ့ ဆိုင်က ခေါက်ဆွဲကြော် တပွဲမှာစားခဲ့ပါတယ်။
ခဏနေကြရင် ဘက်စကား က Hotel ကို လိုက်ပို.မှာဖြစ်ပါတယ်။ Hotel မှာ Check-in လုပ်၊ အထုပ်အပိုးတွေ ထား၊ မနက် ၉ နာ၇ီကျ၇င် ခုနက ၀ယ်ထားတဲ့ ပထမဆုံး Half-day tour ကားက Hotel ကို လာခေါ်မှာပါ။
Chinese kid from our bus.
Before sending us to the Hotel, the bus stopped for breakfast break where food court and tour company are located. One tour guide came to our bus and promote the day tour package from his company. I bought2half-day tours
1- Tea plantation + factory + Mossy forest tour (inclusive of light refreshment)
2- Strawberry + Cactus + lettuce farm (inclusive of steamboat dinner)
Each tour costs about RM60 per person.
့Hotel ကို သွားတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက် တွေ.၇တဲ့ ရူခင်းကို Bus ပေါ်ကနေ ၇ိုက်ထားတာပါ။ တောင်ပေါ်မြို.ဆိုတော့ အင်မတန် အေးအေးချမ်းချမ်း နဲ. စိမ်းစိမ်းစိုစို ရှိပါတယ်။
Hotel Equatorial ကိုေ၇ာက်ပါပြီ။ Hotel က4stars လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ခ၇ီးသွားတိုင်း ဈေးပေါတဲ့ Guest house မှာပဲ တည်းတာများတော့ ဒီ Hotel က ကျွန်တော့် အတွက် တော်တော်လေး ကောင်းနေပါပြီ။ အတွင်းပိုင်းက အပြင်အဆင် တွေ တော်တော်လေး ခမ်းနားပါတယ်။ မီးလှုံတဲ့ ဖိုလေး လုပ်ထားတာ အင်မတန်ကို သဘောကျမိပါတယ်။
I was waiting at the hotel lobby for the tour car to pick me up at 9am. It was the 1st half-day tour (Tea plantation + factory + Mossy forest tour).
ံHotel lobby မှာ လာခေါ်မည့် Tour ကားကိုစောင့်နေပါတယ်။ ၉နာ၇ီထိုးတော့ ချိန်းထားတဲ့ အတိုင်းလာခေါ်ပါတယ်။ ကားပေါ်မှာ တခြား ခ၇ီးသွားတွေလဲပါတယ်။
ဟိုတယ်ကနေ မိနစ် ၂၀လောက်မောင်း လိုက်တော့ ပုံတွေမှာ တွေ ရတဲ့ လက်ဖက် စိုက်ခင်းကိုေ၇ာက်ပါတယ်။ အင်မတန် ၇င်သက်၇ူမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ ၇ူခင်းလို.ပြောလို.၇ပါတယ်။ ကျွန်တော့် တစ်သက်မှာ ဒီလို လက်ဖက်စိုက်ခင်းကို ဒါပထမဆုံး တွေ.ဖူးတာပါ။
This is the first stop of the tour. The driver gave us about 30 minutes to enjoy this breathtaking view of the tea plantation. He also explained some information about this place but I was busy taking photos of this amazing scenery so I didn't get much info of this place.
ကားဆ၇ာက ကား၇ပ်ပေးပြီး ကျွန်တောတို.ကို ဒီနေ၇ာမှာ နာ၇ီဝက်နောက် အချိန်ပေးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူက ဒီနေ၇ာ ရဲ. သမိုင်းကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြပါတယ်။ ပုံပြင်နားထောင်ရတာ သဘောကျတဲ့ အင်္ဂလိပ် တွေကတော့ စိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေကြပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ သူပြောတာ နားမထောင်နိုင်ပဲ ဓါတ်ပုံကိုပဲ အသည်းအသန် လိုက်၇ိုက်နေမိတယ်။
ကားဆ၇ာ ရှင်းပြတဲ့ထဲက တစွန်းတစ ကြားမိတာကတော့ ဒီစိုက်ခင်းမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ သူတွေက ဘင်္ဂလား၊ အိန္ဒိယ နဲ. မြန်မာ နိုင်ငံက အလုပ်သမားတွေရှိကြောင်း။ ဒီက လက်ဖက်တွေကို ဘယ်နိုင်ငံတွေကို ပို.ကြောင်း၊ လက်ဖက်တွေနဲ. ဘယ်လို ထုတ်ကုန်တွေ လုပ်ကြောင်း စတာတွေကို ရှင်းပြနေတာပါ။ သူပြောတဲ့ ပုံအ၇ လက်ဖက် ကို စားတယ်လို.တော့ မကြားမိဘူး။ ကြည့်၇တာ လက်ဖက်ရွက် ကို သုတ်ပြီးစားတာ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံတည်းပဲ ရှိလားမသိဘူးနော်။
အချိန်၇၇င် ဟောဒီ လက်ဖက်ခင်းတွေ ကြားထဲ ဆင်းပြီး လက်လျှောက်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Tour ရဲ.ခရီးစဉ်အ၇ အချိန်သိပ်မပေးတော့ အပေါ်စီးကနေပဲ ကြည့်ပြီး ကျေနပ် ခဲ့၇တယ်။ ကားဆ၇ာ ရှင်းပြနေတာ သေချာ နားမထောင်တော့ ဒီနေ၇ာမှာ ဓါတ်ပုံတွေ တော်တော်များများ၇ိုက်ဖြစ်လိုက်တယ်။ အခု စာေ၇းနေ၇င်း ပုံတွေ ကြည့်ပြီး ပြန်သွားချင်စိတ်တောင် ပေါက်မိတယ်။ စာဖတ်သူကော ဒီနေ၇ာကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ? လှတယ်မဟုတ်လား? :P
Hostel for the Tea plantation & factory worker. I want to live there too. :)
အပေါ်က ပုံက အ်ိမ်လေးတွေက လက်ဖက်စိုက်ခင်းမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေ နေတဲ့ အလုပ်သမားတန်းလျားပါ။ လက်ဖက်စိုက်ခင်းတွေနဲ. ပြည့်နေတဲ့ တောင်တွေက ၀န်း၇ံထားတော့ ၇ူခင်းက အ၇မ်းကိုလှပါတယ်။ လာလည်တဲ့ သူတွေအနေနဲ.ကတော့ ဒီနေ၇ာ ကအ၇မ်းနေချင်စဖွယ် ဖြစ်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အလုပ်သမားတွေအနေနဲ. ဒီနေ၇ာကို ကျွန်တော်တို. မြင်သလိုမြင်နိုင်ပါ့မလား?
To be continue.
at 5/09/2014 08:49:00 PM
Labels: Cameron Highland, Food, Landscape, Malaysia
Tun Tun has been to: Cambodia, Canada, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam.
Sign up to receive new posts by email:
Cameron Highland, Malaysia #3 (BOH Tea Centre)
Cameron Highland, Malaysia #2 (Mossy forest)
Water World Show, Jurassic Park, Voyage De LAVE & ...
Please leave meanote. :)
Food (174) Myanmar (171) Singapore (109) Myanmar Food (106) Mandalay (86) Landscape (56) Malaysia (55) Night (54) Animal (49) Thailand (47) Yangon (41) Flower (39) Portrait (28) Street (26) Phuket (25) Kid (24) Event (23) Bangkok (22) Model (18) Architect (17) Candid (17) Video (16) Bagan (13) Celebrity (13) Malay Food (13) Fashion Show (12) Inle Lake (11) Thai Food (11) Singapore Food (10) Still Life (10) Penang (9) Art (8) Cameron Highland (8) Pyin Oo Lwin (8) Taungyi (8) Waterfall (8) Langkawi (7) Monywa (7) Indoor (6) Sunset (6) Chinese Food (5) Pindaya (5) Semporna (5) Bokeh (4) Christmas (4) Indonesia (4) Insect (4) Johor (4) Kalaw (4) Kota Kinabalu (4) My Niece (4) Sagaing (4) Sunrise (4) Airplane (3) Canada (3) Inn Dein (3) Korea (3) Mingun (3) Phone Photography (3) Tutorial (3) Wedding (3) Zoo (3) Amarapura (2) Batam (2) Bintan (2) Cherry (2) Cinema (2) Firework (2) Indonesia Food (2) Innwa (2) Malacca (2) N8 (2) Raya Island (2) Sport (2) Taung Pyone (2) Thingyan (2) U Bein (2) Vancouver (2) Audio (1) Cambodia (1) Concert (1) Daffodil (1) Dee Doke (1) Funny (1) HTC (1) Htan San (1) Interior (1) Japanese Food (1) Korean Food (1) Lee Kuan Yew (1) Lightroom (1) Macro (1) Mi4i (1) Nyaung Shwe (1) Photoshop (1) Sakura (1) Sharing (1) Song Seung-Heon (1) Universal Studio (1) Vietnam (1) nle Lake (1)
မန္တလေး သက်သက်လွတ် တိုးဖူးနွေး ၊ တိုးဖူးကြော် ၊ ခေါပုတ်
Shan Food stall @ Mandalay
Yangon #2 (Good Morning & Shwe Dagon Pagoda)
T.M.Lewin Men Fashion Show
Siam Ocean World, Bangkok
Mandalay appetizers (ထိုးမုန်.၊ ဆနွင်းမကင်း၊ကရေကယာ)
Funny Ads in Myanmar
Westlife The Gravity Tour Live in Singapore 2011 #2 (Video)
Mandalay Foods (အာပူလျှာပူ၊ ရှောက်သီးသုပ်၊ ထမင်းသုပ်၊ ကျောက်ကျောရည်)
Food Photography #3
River Hong Bao 2014
Cameron Highland, Malaysia #6 (Cactus Point)
Inle Lake (Inn Dein Village) #10
Orchard Fashion Step Out 2014
Pindaya Cave #4
Sunset at Kandawgyi garden & hotpot dinner @ Yangon
How to go Dee Doke Waterfall, Mandalay (ဒီးဒုတ်ေ၇တံခွန်/ေ၇ပြာစမ်း)
Kandawgyi garden, Breakfast & Yangon Airport
Olympus & Samsung Partnership Rumor - How Can Samsung Benefit From This?
Celebrating Earth Day in commercial photography